I-infographics: Ilungele iTrafikhi kunye ne-SEO
Njengoko ujikeleza kumajelo eendaba ezentlalo okanye iiwebhusayithi, uya kuhlala ufika kwimizobo yolwazi eyilwe kakuhle ebonelela ngamagqabantshintshi ngesihloko okanye ukwahlula iitoni zedatha zibe ngumzobo oqaqambileyo, omnye, ofakwe kwinqaku. Inyani yile… abalandeli, ababukeli, kunye nabafundi bayabathanda. Inkcazo ye-infographic yile...
I-Infographics yimifanekiso ebonakalayo yolwazi, idatha, okanye ulwazi olujoliswe ekuboniseni ulwazi ngokukhawuleza nangokucacileyo. Banokuphucula ukuqonda ngokusebenzisa imizobo ukukhulisa amandla enkqubo yokubona komntu ukubona iipateni kunye neendlela.
Kutheni uTyala iInfographics?
I-Infographics yahlukile, kakhulu ethandwayo xa kuziwa kwintengiso yomxholo, kwaye ubonelele ngenani leenzuzo kwinkampani esabelana ngazo:
Akuvumelekanga - Ngokungafaniyo neminye imixholo, i-infographics iyilwe kwaye yakhelwe ukuba kwabelwane ngayo. Inqaku elilula kupapasho, iintatheli, abaphembeleli, kunye nabafundi abanokuthi bazizinzise kwaye babelane ngalo ukuba nje benxibelelanisa umva kwindawo yakho kwaye babonelele ngetyala yinto eqhelekileyo.
Cognition -I-infographic eyilwe kakuhle igaywa ngokulula kwaye iqondwe ngumfundi. Lithuba elihle lenkampani yakho ukuba yahlule inkqubo entsonkothileyo okanye isihloko kwaye yenze kube lula ukuyiqonda… ifuna nje umzamo omncinci.
Ukwabelana -Ngenxa yokuba iyifayile enye, kulula ukuyikopa okanye ukubhekisela kuyo yonke i-Intanethi. Oku kwenza kube lula ukwabelana… kwaye i-infographic entle inokuhamba nentsholongwane. Ingcebiso enye kule nto - qiniseka ukuba uyayicinezela i-infographic ukuze ingadingi itoni ye-bandwidth ukukhuphela kunye nokujonga.
Abathinteli -Iisayithi ezifana Martech Zone ukuba uthando olunempembelelo yokwabelana nge-infographics kuba igcina itoni yexesha ekuphuhlisweni komxholo.
Khangela ngokwenqanaba -Njengoko iisayithi zabelana kwaye ziqhagamshela kwi-infographic yakho, uyaqokelela i-backlinks ebaluleke kakhulu kwisihloko… ihlala inyusa umgangatho wakho wesihloko esixoxwa yi-infographic.
Ukuphindaphinda -I-Infographics ihlala iyingqokelela yezinto ezahlukeneyo, ngoko ke ukwaphula i-infographic kunokubonelela ngeminye imixholo emininzi yeentetho, amaphepha amhlophe, amaphepha-nye, okanye uhlaziyo lwemidiya yoluntu.
Amanyathelo okuphuhlisa i-Infographic
Sisebenza nomxhasi ngoku oneshishini elitsha, indawo entsha, kwaye sizama ukwakha ulwazi, igunya, kunye ne-backlinks. I-infographic sisisombululo esigqibeleleyo sale nto, ke ngoku iyaphuhliswa. Nantsi inkqubo yethu yokuphuhlisa i-infographics kumthengi:
Uphando elingundoqo -Sichonge inani lamagama angundoqo ebengakhuphisani kakhulu ukuba singathanda ukuqhuba isikhundla kwindawo yabo.
ukufaneleka -Siphande isiseko sabo sangoku sabathengi ukuze siqinisekise ukuba isihloko se-infographic sesinye abaphulaphuli babo abaya kuba nomdla kuso.
Research -Sichonge imithombo yophando lwesibini (iqela lesithathu) esinokubandakanya ngaphakathi kwe-infographic. Uphando oluphambili lulungile, nalo, kodwa luya kufuna ixesha elininzi kunye nohlahlo lwabiwo-mali kunokuba umthengi wayekhululekile.
Ukuphuma -Sichonge abaphembeleli kunye neewebhusayithi ezipapashe i-infographics kwixesha elidlulileyo ezinokuthi zibe zinjongo ezinkulu zokukhuthaza i-infographic yethu entsha.
Sipho -Sidibanisa unikezelo lwesiko kwi-infographic ukuze sikwazi ukulandelela zonke iitrafikhi kunye noguquko oluveliswe yi-infographic.
Copywriting -Siye sacela uncedo lomntu onelungelo lokukopisha okhethekileyo ngokufutshane, izihloko ezifumana ingqalelo kunye nekopi emfutshane.
UkuBhanisa -Siphuhlise imizobo yokwenyani sisebenzisa uphawu lwenkampani entsha ukuqhuba ulwazi lohlobo.
Unxibelelwano -Sisebenze ngokuphindaphindiweyo ukuqinisekisa ukuba ikopi, imizobo, kunye ne-infographic ichanekile, ayinampazamo, kwaye umxhasi wayekhululekile ngayo.
Imidiya yokuncokola -Saphule izinto zegraphical ukuze inkampani ibe nothotho lohlaziyo lwemithombo yeendaba zentlalo ukukhuthaza i-infographic.
lweFIFA -Siphuhlise iphepha lopapasho, liphuculwe kakhulu ukukhangela ngekopi ende ukuqinisekisa ukuba lifakwe kakuhle kwaye songeze umkhondo wegama eliphambili kwiqonga lethu lokukhangela.
Ukwabelana -Sifake amaqhosha okwabelana ngentlalo ukuze abafundi babelane nge-infographic kwiiprofayile zabo zentlalo.
wokuKhuthaza -Iinkampani ezininzi kakhulu zithatha i-infographics njengento enye kwaye yenziwe ... ukuhlaziya, ukupapasha kwakhona, kunye nokukhuthaza i-infographic enkulu rhoqo sisicwangciso esikhulu sokuthengisa! Akunyanzelekanga ukuba uqale ukusuka ekuqaleni ngayo yonke i-infographic.
Nangona isicwangciso se-infographic sinokufuna utyalo-mali olukhulu, iziphumo bezisoloko zilungile kubathengi bethu ukuze siqhubeke siphuhlisa njengenxalenye yomxholo jikelele kunye nesicwangciso semidiya yoluntu. Senza ngokwahlukileyo kwishishini ngokwenza nje itoni yophando kunye nokusebenza ukuphuhlisa i-infographic kakuhle, kodwa sibuyisela zonke iifayile ezingundoqo kumthengi wethu ukuze siphinde siphinde siphinde siphinde siphinde sithengise enye indawo kwiinzame zabo zokuthengisa.
Fumana i-Infographic Quote
Le yi-infographic endala evela Umtsalane weMagnetism kodwa ibeka zonke iingenelo ze-infographics kunye nesicwangciso esikhaphayo. Kwiminyaka elishumi kamva kwaye sisabelana nge-infographic, ukuqhuba ulwazi kwi-arhente yabo, kunye nokubonelela ngekhonkco elihle elibuyela kubo!
tags: qhinga lomxholoumazibuthe wabathengihighbridgekwi-infographicuyilo lwe infographicumyili we-infographicumzobo wolwaziUhlobo lwegama elingundoqoyophando ngegama elingundoqoudidiumxholo ophindayoImidiya yokuncokolaUkwabelana ngemidiya yoluntuukwabelana ngoluntuIxabiso le-infographicumxholo wentsholongwaneumbonoumxholo obonisiweyoyintoni infographic
Aug 22, 2012 ngo-6:49 PM
Ukufaneleka kwe-Infographics kukhula mihla le kwimidiya yoluntu. I-arhente yentengiso ye-intanethi endiyikhethileyo ibindibonisa amanani achanekileyo ngendlela ezisebenza ngayo ngokwenene ezi zinto. Isithuba esihle!